Vaovao farany LG G2 ho an'ny Kit Android raha tsy very ny Root na ny Recovery | Androidsis
Ao amin'ny lesona manaraka dia hasehoko anao ny fanavaozana ny LG G2 maodely iraisam-pirenena na D802 amin'ny kinova Android farany fitazonana ny Root sy ny Recovery novaina aorian'ny fanavaozana ny Android 4.4.2 Kit Kat.
Raha te-hanaraka an'ity lesona ity dia lojika tokony hananana modely terminal mifanentana, izany hoe ny LG G2 D802 ary ao amin'ny a Stock firmware 4.2.2 avy amin'ny LG na tsy mahomby izay Romana masaka ho an'ity terminal mampihetsi-po avy amin'ny LG ity.
1 Fitandremana tokony hodinihina
Fitandremana tokony hodinihina
Voalohany indrindra, araho ny torolàlana eto amin'ny taratasy ary aza miala amin'ny dingana rehetra.
Ity dia tsy natao afa-tsy amin'ny LG G2 modely D802.
Midira ao a Firaketana firmware 4.2.2 amin'ny Root sy fanarenana na tsy mahomby izany amin'ny romana masaka rehetra.
Manaova fanarenana CWM na PhilZ, amin'izao fotoana izao avy amin'ny TWRP dia tsy mandeha io fomba io.
Manaova a nandroid backup avy amin'ny fanarenana ny rafitray ankehitriny rehetra.
Manaova a fampirimana EFS backup.
Ampidino ny fikirakirana USB avy amin'ny fikirakirana ny rafitra ary koa ny batterie voampanga ho 100 × 100 amin'ny fahafahany
Manavao ny Android anay amin'ny kinova sôkôla farany an'ny rafitra miasa Google ary aza very ny Root na ny fanarenana nohavaozina, mila fotsiny isika ampidino ity zip ity izay misy ny Rom farany ny ekipan'ny ArdedevTeam, ekipa fampandrosoana lehibe ho an'ny LG G2 avy amin'ny forum HTC mania.
Raha vantany vao alaina ny rakitra ZIP dia alainay amin'ny fahatsiarovan'ny LG G2 D802 y mamerina amin'ny laoniny fanarenana izahay hanohy ny fizotry ny fametrahana Rom.
Efa avy amin'ny maody fanarenana, tadidio fa miditra amin'ny finday isika ary mitazona midina miampy herinaratra mandra-pahatongan'ny logo lg, avy eo mamoaka iray segondra fotsiny isika ary manery ilay fitambarana mitovy mandra-pahazoantsika ilay fampitandremana Hard reset. Ao amin'ny efijen'ity fampandrenesana ity dia manindry indray ny volantsika isika ary aorian'ny fampitandremana dia hiditra ao amin'ny fanarenana novaina isika nefa tsy nanao ny Hard reset.
Ireo mpamorona ny Rom dia tsy manome sosokevitra azy ireo na hanome torohevitra azy ao amin'ny kofehy forum, na izany aza Manohana ny famafana tanteraka ny terminal aho hiantohana ny fahombiazana tsaratsara kokoa aorian'ny fanavaozana ny Android 4.4.2 Kit Kat. Ka raha hanaraka ireto dingana ireto ianao dia tadidio fa hamafa ny atin'ny Smartphone rehetra izahay afa-tsy ny karatra SD sy ny atiny toy ny sary sy horonan-tsary voatahiry ka raha te hitazona ny rindranasao sy ny angon-drakitra ianao dia ilaina izany. manaova backup amin'ny zavatra rehetra amin'ny sasany Fampiharana karazana Titanium Backup.
Hatramin'izay Recovery Hanaraka ireto dingana tsotra ireto izahay:
Advanced / mamafa cache cache dalvic
Misafidy ny zip Rom teo aloha izahay ary manamafy ny fametrahana azy
Amin'izany dia efa ananantsika ny LG G2 ao amin'ny kinova farany an'ny Android 4.4.2 Kit Kat ary tsy mila very ny fanamboarana novaina na ny fakan'ny terminal.
Ho an'ireo tia ahy nohavaozinao ny LG G2 anao amin'ny alàlan'ity lesona ity miaraka amin'ny rom Vodafone izay voalohany nivoaka, alohan'ny hidirany aminao hanaraka ity fampianarana ity, tadidio fa tsy mitombina io amin'ny Android kinova 4.4.2 Kit Kat satria mila manana a Fanarenana voaova. Noho izany dia tsy maintsy ataontsika aloha Atsofohy amin'ny terminal 4.2.2 an'ny Android ny terminal misy anay ary avy eo Rooter ary apetraho ny iray amin'ireo fanarenana roa manohana.
Handefa fampianarana feno aho mandritra ny fotoana fohy, hanazava ny fizotrany manontolo aloha ampitao amin'ny Android 4.2.2 ny terminal anay ary avy eo afaka manavao amin'ny Android Kit Kat nefa tsy mila very na dia Root tsy ny Recovery farany.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova LG G2 rehetra
Ampidino - Rom Android 4.4.2 Kit Kat an'i ArdeDevTeam avy amin'i HTCmania
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 ho an'ny Android 4.4.2 Kit Kat nefa tsy very ny fanovana voaova
polona dia hoy izy:
Salama. Azo atokisana ve? Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny efitrano? Satria ny dingana hafa dia nanaraka ireo dingana sy ny fakan'ny very
Mamaly an'i polin
Amin'ity Rom ity dia tsy ho very ny Root na ny Recovery. Voamarina tao amin'ny HTCmania.
Enyer Carreño dia hoy izy:
Tena niasa tamin'ny Lg g2 D802 ahy tsy nisy vaovao izany. Fiarahabana avy any Caracas Venezoelà
Eny, tsy dia mety loatra ny nilazako izany. Vao tsapako fa nahazo ity lesoka ity aho "indrisy, tapaka ny hafatra" rehefa manandrana mandefa hafatra an-tsoratra na miaraka amin'ilay rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra izay tonga amin'ny alalàn'ny na Hangouts. Hatao inona izany ???
mila fotoana maharitra ve ny famerenana ny famerenan'ny factori?
Tsy dia ela, roa minitra na roa.
Ry namako, nametraka ny kit ofisialy kat 4.4.2 tamin'ny alàlan'ny torolàlana ho an'ny lg g2 aho, saingy very ny fanarenana manokana, feno fankasitrahana aho raha manome torolàlana na zavatra iray ahafahana manana fanarenana manokana amin'ny kitkat 4.4.2. .. misaotra, arahaba avy any Venezoelà
Ity ny dingana tokony harahina, nohamariniko manokana:
Raha efa manana ny kinova malalaka 4.4.2 napetraka aho, azoko atao ve ny mamaka azy io?
Tolin dia hoy izy:
Nosakanana tamin'ny fanarenana aho ary tsy afaka nanao na inona na inona, torohevitra, fisaorana
Mamaly an'i Tolin
Eny, velona indray izao, miala tsiny amin'ny fanairana
Carreño Manana olana mitovy amin'izany amin'ny hafatra aho rehefa te handefa tsara, manidy ny fampiharana ???? manampy ahy amin'izany izy ireo fa manana LG g2 aho
Mamaly an'i nelson
Tsy misy famantarana mitazona ahy
manel dia hoy izy:
tsy mampiasa bateria bebe kokoa noho ny teo aloha ny jelly beam ???
Mamaly an'i manel